Tamin'ny 20-22 Jiona Jizhong Group dia nanatrika VIV Europe 2018 tany Utrecht, Holandy
Nandritra ny 3 novambra 2017 ka hatramin'ny 8 novambra 2017, inspektera avy amin'ny Birao nasionaly momba ny fanafody sy ny poizina (NMPB)
Tamin'ny 20-22 Jiona Jizhong Group dia nanatrika VIV Europe 2018 tany Utrecht, Holandy. Miaraka amin'ny tanjona misy mpitsidika 25 000 sy orinasa fampirantiana 600, ny VIV Europe no hetsika ambony indrindra amin'ny indostrian'ny fahasalamana biby. Nandritra izany fotoana izany, mpandray anjara hafa ao amin'ny ekipa izahay no nandray anjara tamin'ny CPhI China 20 ...
Tamin'ny 20 Jolay 2016, ny lefitry ny minisitry ny fambolena Yu Kangzhen sy ny lefitry ny tale jeneralin'ny birao misahana ny fanabeazana Xiang Chaoyang dia nitsidika ny toby famokarana vaovao tany Qingyuan, tanàna Baoding. Ny lefitry ny minisitra Yu dia nanasongadina fa satria iray amin'ireo mpanamboatra betiravy lehibe indrindra, Jizhong Pharmaceut ...
Nandritra ny 3 novambra 2017 ka hatramin'ny 8 novambra 2017, ireo inspektera avy amin'ny Birao nasionaly momba ny fanafody sy ny poizina (NMPB), Sudan dia nanao famandrihana GMP tao amin'ny Baoding Sunlight Herb Medicament Co., Ltd, iray amin'ny orinasa famokarana Baoding Jizhong Pharmaceutical Group. Miaraka amin'ny ezaky ny orinasa iray manontolo, ...